Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Kirk Ziehm họpụtara onye isi ọhụụ nke Buildout
Buildout, onye ndu na akpaaka ahịa ahịa CRE, họpụtara Kirk Ziehm ka ọ bụrụ onye isi ụlọ ọrụ ọhụrụ. Onye ndu nwere ahụmịhe na ahụmịhe, Kirk ga -ewetara ndekọ egwu siri ike nke afọ 20+ nke onye isi pụrụ iche, njikwa arụmọrụ yana mgbado anya nke ọma iji mee ka ihe ọhụrụ Buildout dị ọhụrụ na atụmatụ uto.
Na mbụ, Kirk nwere nnukwu onye ndu ndị isi na ndị na -eweta teknụzụ gụnyere Zego (Kwadoro site na PayLease), SeatGeek, na Cvent. N'oge na -adịbeghị anya, Kirk bụ COO nke Zego (Kwadoro site na PayLease), ụlọ ọrụ teknụzụ ihe onwunwe na -enyere ndị na -arụ ọrụ aka ime ka ahụmịhe obibi ha ka ọ dị ọhụrụ ma kwalite njigide.
Ziehm kwuru, "Buildout nwere ọmarịcha akụkọ ihe mere eme nke ijere obodo azụmaahịa azụmahịa ozi." “Ana m atụ anya iso ndị otu anyị nwere nka na-arụ ọrụ iji gaa n'ihu na-ebuga ma na-emeziwanye ụzọ anyị ga-esi na-agafe klas n'ofe ndụ CRE. Site na ire ahịa ruo CRM ruo nkwado azụmaahịa - North Star anyị na -enyere ndị ahịa anyị dị ịtụnanya aka imechi azụmahịa ndị ọzọ, nwekwuo ọhụhụ na nzukọ ha yana nweta data ka mma n'ime ahịa ha. ”
Kris Krisco, onye isi ndị ahịa na onye guzobere Buildout kwuru, "Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ọ dabara na anyị nwere Kirk n'òtù anyị. Ahụmịhe ya na -eduga, ime ka ọ dị mma ma na -arụ ọrụ ga -abụ isi ihe na -aga nke ọma na ahụmịhe ndị ahịa anyị. Ọdịnihu dị mma maka ndị na -ere ahịa azụmaahịa! ”